Nwere ike Food Machine, Mkpụrụ osisi ihe ọ Machineụ Machineụ Machine, Tomato n'ihu Machine - JUMP
MGBE igwe (SHANGHAI) LIMITED bụ oge a elu-tech nkwonkwo-ngwaahịa ụlọ ọrụ, nke mbụ bụ Shanghai Light Industry Machinery Factory, nke a na-ọkachamara na uzo isi nhazi akara nke lekwasị mkpụrụ ihe ọ juiceụ juiceụ mkpụrụ osisi, jam, pulp, ebe okpomọkụ mkpụrụ osisi nhazi, na-ekpo ọkụ ndochi ihe ọ juiceụ juiceụ mkpụrụ osisi, ahịhịa ma ọ bụ ihe ọ teaụ teaụ tii, ihe ọ drinksụ Carụ abonụrụma, yogọt, chiiz na mmiri ara ehi mmiri ara ehi nhazi usoro. Ndị ọrụ anyị nwere ezigbo omume ọma, yana ndị injinia ọkachamara, ndị ọrụ ntanetị na ndị ọrụ R & D sitere na ụlọ ọrụ ihe eji emepụta nri mbụ, nwekwara ọtụtụ nna ukwu na Ph. D nke injinia nri na akụrụngwa akụrụngwa, yabụ anyị zuru oke. na keukwu ikike nke emebe na mmepe nke dum oru ngo, n'ichepụta, echichi nyere, ọzụzụ oru, mgbe-ahịa ọrụ na akụkụ ndị ọzọ.
Akụrụngwa kichin na-ezo aka akụrụngwa na ngwaọrụ etinye na kichin ma ọ bụ maka isi nri. Ngwongwo kichin na-agụnyekarị akụrụngwa na-ekpo ọkụ, akụrụngwa nhazi, disinfection na ngwa nhicha nhicha, ọkụ nkịtị na nchekwa nchekwa ala. The kichin ọtọ ebe isi nri ụlọ ọrụ na-ekewa n'ime: staple nri nkwakọba, na-abụghị staple nri nkwakọba, akọrọ ngwongwo nkwakọba, salting ụlọ, achịcha dị iche iche, nri ụlọ, oyi na efere ụlọ, isi nhazi ụlọ ...
Apple, ube, grape, po ...
Apple, ube, greepu, igwe pọmigranet na mmepụta akara dị mma maka nhazi apụl, ube, mkpụrụ vaịn na pọmigranet. Ọ nwere ike na-emepụta doro anya ihe ọ juiceụ juiceụ, turbid ihe ọbidụ juiceụ, lekwasị ihe ọ juiceụ juiceụ, mkpụrụ ntụ ntụ, mkpụrụ osisi jam. Mmeputa akara tumadi mejupụtara Scraper mbuli, afụ Cleaner, ahịhịa Cleaner, preheater, precooking igwe, crusher, beater, juicer, belt juicer, kwụ ịghasa centrifuge, urukurubụba centrifuge, ultrafiltration ngwá, filtration ngwá, resin adsorptio ...
Olive, piom, bayberry, ...
Olive, piom, bayberry, peach, aprịkọt, pịlị nhazi igwe yana imepụta akara dị mma maka nhazi oliv, pịịlị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, bayberry, piich, aprịkọt na piom. Ọ nwere ike ịmị ihe ọ juiceụ juiceụ doro anya, ihe ọ juiceụ juiceụ turbid, pulp mbụ, ihe ọ juiceụratedụ a ma ama, lekwasị pulp, ntụ ntụ, mkpụrụ osisi jam, mmanya mmanya na ngwaahịa ndị ọzọ. Olive, piom, bayberry, peach, aprịkọt, pịlị nhazi igwe na imepụta akara bụ nke mejupụtara igwe nhicha, mbugo, UV sterilizer, nuklia na-ewepụ, onye na-akụ ...
Bluuberi, blackberry, mulberry, strawberry, raspberry, red bayberry, kranberị nhazi igwe na mmepụta akara nwere ike mepụta doro anya ihe ọ juiceụ juiceụ, turbid ihe ọ juiceụ juiceụ, ihe ọ juiceụ juiceụ uche, mkpụrụ ntụ ntụ, mkpụrụ osisi jam na ndị ọzọ na ngwaahịa. Mmepụta akara tumadi mejupụtara afụ ịsa igwe, mbuli. , igwe nyocha, ihe juicer akpa ikuku, tank enzymolysis, decanter, ultrafilter, homogenizer, igwe degassing, igwe sterilization, igwe juputara, igwe elekere na akụrụngwa akụrụngwa ndị ọzọ. Nke a ...
Mango, ọkwụrụ bekee, papa ...
Ọ nwere ike na-emepụta doro anya ihe ọ juiceụ juiceụ, turbid ihe ọbidụ juiceụ, lekwasị ihe ọ juiceụ juiceụ, mkpụrụ ntụ ntụ, mkpụrụ osisi jam. Nke a akara gụnyere afụ ihicha igwe, ndoli, nhọrọ igwe, ahịhịa ihicha igwe, ịcha igwe, precooking igwe, ekpepụsị na denudation igwe, crusher, belt juicer, separator, ịta akụrụngwa, sterilizer na ndochi igwe, wdg a na-emepụta usoro mmepụta echiche dị elu na ogo dị elu nke akpaaka; Isi akụrụngwa bụ ihe ejiri igwe anaghị agba nchara, wh ...
Obere yogot akụrụngwa
Yogọt ngwaahịa na ahịa ọtụtụ nke ...
Mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ...
Ngwaahịa ikpeazụ: mkpụrụ osisi a mịrị amị, nke a mịrị amị ...
Pure mmiri prodution m ...
ọcha mmiri prodution igwe eruba: Raw mmiri →
Carbonated ihe onunu ihe ...
Ihe ọ drinksụụ na-egbu egbu, ihe ndị bụ isi gụnyere ...
Akụrụngwa ihe onunu na ...
Dị iche iche nkịtị ihe ọ juiceụ juiceụ: apụl ihe ọ juiceụ juiceụ, mkpụrụ osisi grepu j ...
Ngwa ngwa na Spag ...
Mmepụta akara si akụrụngwa ingre ...
Oyi kpọnwụrụ French fries equipmet usoro eruba: Li ...
Soft swiiti igwe na mmepụta akara usoro ...
Akara equ. Dabere na usoro dị iche iche ...
Self biya biya ọhụrụ ...
A breụ biya biya na-ezo aka biya biya nke o ...
Banyere mmiri ara ehi
Ugbu a ọnọdụ nke mmiri ara ehi na ngwaahịa na China Na-aga n'ihu mma nke ndị mmadụ ndụ ụkpụrụ, anụ ụlọ na-eji ọkụ na-achọ ọzọ na ndị ọzọ elu-edu mmiri ara ehi na ngwaahịa. Dairylọ ọrụ mmiri ara ehi bụ ụlọ ọrụ na-eto ngwa ngwa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe oriri. Kemgbe mgbanwe ...
A na-ekesa mba ndị isi tomato na-emepụta ihendori na North America, akụkụ Osimiri Mediterenian na akụkụ ụfọdụ nke South America. Na 1999, nhazi uwa nke ihe ubi tomato, mpekere tomato meputara site na 20% site na 3.14 nde ton na afo gara aga rue ...